မိုဘိုင်းဖုန်းကဲ့သို့အိုင်ပက်တွင် SMS ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
အိုင်ပက်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းကဲ့သို့ SMS ကိုမည်သို့ရရှိရမည်နည်း
Cristian Garcia | | မက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
အကယ်၍ သင်သည် iPhone အသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီး၊ MacOS ပါသည့် iPad သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာရှိလျှင်၊ ipad တွင် sms ကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည်။
ယခုအားဖြင့်သင်ပြီးသားအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နိုင်သည် ဆက်လက် (အဆက်) ။ Continuity ဆိုတာ Apple က iOS 8 နဲ့ OS X Yosemite မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်သည် iPhone5နှင့်အထက်နှင့် ၄ မျိုးဆက် မှစတင်၍ မည်သည့် iPad နှင့်မဆို4နှင့်နောက်ပိုင်းမှ Mac လက်တော့ပ်များသို့မဟုတ်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် (ခြွင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သော Mac Pro) ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Apple မှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်သင်လုပ်နိုင်သည်မှာအခြားအရာများအပြင်အခြေခံအားဖြင့်တာ ၀ န်ရှိသည် ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS လက်ခံရရှိသည် iPads (သို့) မက်စ်တွေပေါ်မှာ (သမိုင်းမှာပြိုကျခဲ့တဲ့သတင်းစကားတွေ၊ ငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးလက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့သူတို့ဂိမ်းဘယ်လောက်ပေးခဲ့တာလဲ) ။
ဒီတော့သင့်အတွက်မရှင်းခဲ့ရင် \_ t iOS 8 နှင့် iMessage ကို အသုံးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်သည် iPad, iPod Touch သို့မဟုတ် Mac မှမည်သည့် iPad နှင့်မဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီးမည်သည့် SMS မှမဆို SMS ပို့နိုင်သည်။ သင်၌ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတည်းရှိရာသို့ပို့ရန်နှင့်လက်ခံရန်တက်ကြွသောအချက်အလက်အစီအစဉ်ရှိသော iPhone ဖြစ်သည်။ ဘာမှပို စာမူတပုဒ်လုံးကိုရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်အနည်းငယ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောပြတယ်။ အဆုံးမှာတော့, iMessage application အတွက်သင်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးလိမ့်မည်။
1 အိုင်ပက်တွင် SMS ကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲ - ချိန်ညှိချက်များ
2 မက်ဆေ့ခ်ျများမှစကားပြောဆိုမှုတစ်ခု Pin
3 မက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာစကားပြောဆိုမှု unpin ရန်
5 မက်ဆေ့ခ်ျများစကားပြောဆိုမှုမှ FaceTime သို့ပြောင်းလဲနည်း
အိုင်ပက်တွင် SMS ကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲ - ချိန်ညှိချက်များ
iPad မှာ sms တွေကိုဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်ရင်လုပ်ပါ့မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုအဆင့်အနည်းငယ်နဲ့သင်လက်ခံရရှိမှာပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရိုးရိုးလေးပါ။ ၎င်းကို configure လုပ်ရန်၊ သင်သတိရရမည့်အချက်မှာသင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးသည်ရှိရမည်ဖြစ်သည် iCloud ထဲကို ၀ င်ပြီးဒါတွေအားလုံးဟာ Apple ID နဲ့ပဲ log in လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ၎င်းတို့အားလုံးကို Wi-Fi (သို့) Ethernet ကတူညီသောကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းအပြင်။
နောက်တစ်ကြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်၏ iPhone မိုဘိုင်းဖုန်းကို သွား၍ သွားပါ ချိန်ညှိချက်များ> ဖုန်း> အခြားကိရိယာများပေါ်တွင်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အခြားကိရိယာများမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအားခွင့်ပြုပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ပြီးနောက်သင် iPad ကိုယူပြီးအောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ချိန်ညှိချက်များ> Facetime နှင့် iPhone မှခေါ်ဆိုမှုများကိုဖွင့်ပါ။
တက်ကြွသော SMS နှင့် MMS ရှိရန်iPhone တွင်သင်သည် Settings> Messages> Send and လက်ခံသို့သွားရမည်။ ထိုအရပ်မှသင်သေချာအောင်ရပါလိမ့်မယ် Apple ID သည်သင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော iMessage အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်တူညီသည် သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးပေါ်တွင်။ ထို့နောက် Apple ဖုန်းနှစ်ခုလုံးတွင် iMessages ကိုလက်ခံရရှိရန်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုလည်းရွေးပါလိမ့်မည်။ သငျသညျသိရန်ရှိသည် သင်၏ iPad တွင်လည်းဤအဆင့်ကိုထပ်လုပ်ရန်လိုသည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်သည် iPhone ကိုထပ်မံကောက်ယူရန်လိုလိမ့်မည် (ဟုတ်ပါသည်၊ ဤဆောင်းပါးသည် iPad ပေါ်ရှိ sms များလက်ခံခြင်းအပေါ်အခြေခံသော်လည်း၎င်းကိုအဆက်မပြတ်လွယ်ကူစွာထားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောသင့်သည်။ ) သင်သည်မီနူးသို့ပြန်သွားရမည်။ ချိန်ညှိချက်များ> မက်ဆေ့ခ်ျများ> စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုလွှဲပြောင်း, သင်ခွင့်ပြုလိုသည့်ကိရိယာများကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်သင်၏ iPhone မှစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလက်ခံရရှိရန်တို့ကိုရွေးချယ်ရန်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤကတိထားတော်အဖြစ် SMS, MMS ကိုလက်ခံရရှိရန်သင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည် iPad ကဲ့သို့သောသင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုခေါ်ဆိုသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ iPhone ဖုန်းကမင်းကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ၊ သင်၏ iPad မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမှာပြwithoutနာမရှိပါ ထို့အပြင် iPhone ကိုအိတ်ကပ်ထဲမှထုတ်ယူစရာမလိုဘဲလက်ရှိအိုင်ပက်ဒ်ကိုအသုံးပြုနေပါက၊ iPod တစ်ခုတည်းမှခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်၊ တူညီသောအဆက်အသွယ်များမှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည် (သို့) Face Time မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောပုံမှန်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်တွင်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ iPad မှာ sms တွေဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ထိုအရာသည်မလောက်လျှင်၊ Messages application (iMessages) အတွက်ဆက်တင်အနည်းငယ်ကိုပြသပါမည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် Apple ရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ထိုစကားဝိုင်းကိုပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေရန်၊ သင်၏အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုအက်ပလီကေးရှင်းတွင်မျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်မက်ဆေ့ခ်ျအက်ပ်မှစကားပြောဆိုမှုမှ Face Time ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာမလိုတော့လျှင်၊ ဒါကြောင့်အမှိုက်မရှိတဲ့အတွက်ဆောင်းပါးထဲမှာနောက်ထပ် ၅ မိနစ်နေပါ၊ ပြီးတော့သင်ဖွင့်လိုက်တဲ့စကားဝိုင်းမှာအသုံးဝင်မယ့်အပိုတစ်ခုကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်။
မင်းမသိသေးရင်တောင် မက်ဆေ့ခ်ျများအပလီကေးရှင်းတွင်သင်စကားဝိုင်းအားလုံးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် သင်၏အများဆုံးသောသူများနှင့်အမြဲတမ်းစကားပြောဆိုနိုင်အောင်သင်နှင့်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ စကားပြောဆိုမှုများထိပ်ဆုံးမှထားခဲ့ပါ၊ ၎င်းတို့ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမျက်ခြည်မပြတ်နိုင်၊ ၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းရှိနေစေပြီးရေးချနိုင်မည်။
မက်ဆေ့ခ်ျများအပလီကေးရှင်းတွင်စကားပြောဆိုမှုများရှိနိုင်စေရန် သငျသညျကိုအောက်ပါ configuration ကိုလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်n:
ထို့နောက်သင်၏စကားပြောဆိုမှုများထဲမှတစ်ခုကိုညာဖက်ပွတ်ဆွဲပါ နောက်တစ်ခုမြင်ရမည့် pin ကိုနှိပ်ပါ.
စကားဝိုင်းကိုနှိပ်ပြီးဖိထားပါ သင်စာရင်း၏ထိပ်သို့ဆွဲယူနိုင်သည် လျှောက်လွှာ၏ပြောဆိုမှုများ၏။
မက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာစကားပြောဆိုမှု unpin ရန်
သင်လိုချင်ပါက၊ ယခင်အဆင့်တွင်သင်ရုံတင်လိုက်သောစကားဝိုင်းများကိုမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ယခုသင်ဤမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများအပလီကေးရှင်း၏ထိပ်တွင်အမြဲတမ်းထားရှိရန်စိတ်မဝင်စားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
စကားဝိုင်းကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ၊ မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဆုံးဆီသို့ဆွဲယူရပါလိမ့်မယ်။
စကားဝိုင်းကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ၊ ၎င်းဘေးတွင်ပေါ်လာသော pin ကိုသင်နှိပ်ရမည်။
မက်ဆေ့ခ်ျများအပလီကေးရှင်းတွင်မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဆိုအသစ်ဖြစ်စေ၊ ထို့အပြင်သင်၏ဓာတ်ပုံသည် Memoji (သို့) စိတ်ကြိုက်ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်သိရမည်။ iPad ပေါ်တွင် Messages အက်ပ်ကိုသင်ပထမဆုံးဖွင့်သောအခါ၊ သင်၏အမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ရန် iPad ကပြသသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
သို့ သင်၏တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအရာအားလုံးကိုမျှဝေရန်သင်၏အမည် (သို့) သင်၏ဓာတ်ပုံ (သို့) ရွေးချယ်စရာများကိုပြောင်းလဲပါ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖွင့်ရန်လိုလိမ့်မည်၊ သင်သုံးမည့်အကွက်သုံးခုကိုနှိပ်ပါနှင့်ပြီးနောက် "Edit name and photo" ခလုတ်ကို နှိပ်၍ အောက်ပါရွေးချယ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။
သင့်နာမည်ပြောင်းရန်: သင် .. လုပ်ရမည် သင်၏အမည်ပေါ်လာမည့်စာသားကွက်များကိုနှိပ်ပါ။
အကြောင်းအရာဝေမျှရန်ရွေးစရာများကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရန်မင်းကိုနှိပ်ရမယ် "Share နှင့်ဓာတ်ပုံဝေမျှ" ဘေးတွင်နေရာချ"(အစိမ်းရောင်က activated ကြောင်းဖော်ပြသည်) ။
သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုမည်သူမြင်နိုင်သည်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြေ - ရွေးစရာတခုကိုနှိပ်ရတယ် "အလိုအလျှောက်မျှဝေ" အောက်မှာတည်ရှိပါတယ် ("Share name နှင့်ဓာတ်ပုံ" ကိုဖွင့်ရမည်။ )
Messages ထဲရှိနာမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည် ၎င်းတို့ကိုသင်၏ Apple ID နှင့်အဆက်အသွယ်များမှ "My card" အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်.
မက်ဆေ့ခ်ျများစကားပြောဆိုမှုမှ FaceTime သို့ပြောင်းလဲနည်း
သင့်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျများစကားပြောဆိုမှုပွင့်နေလျှင်၊ သင်စကားပြောနေသူနှင့် FaceTime (သို့) အသံခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုစတင်နိုင်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများအက်ပ်တွင်ပင်လျှင်ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့၊ အောက်ပါအဆင့်တွေကိုသင်လိုက်နာရမည် -
တိုက်ရိုက်ကိုနှိပ်ပါ FaceTime (သို့) အသံ။
ဤဆောင်းပါးသည်အိုင်ပက်ဒ်မှအိုင်ပက်ဒ်တွင် SMS ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ပုံ၊ သင်၏အိုင်ပက်၊ MMS၊ ဓါတ်ပုံများ၊ စတစ်ကာများနှင့်သင်အက်ပလီကေးရှင်းမှအက်ပလီကေးရှင်းမှမက်ဆေ့ခ်ျများမှတစ်ဆင့်သင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်သင်ယူရန်သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ စက်ကိရိယာ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၎င်းကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်နေရာတွင်ထားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » မက် » အိုင်ပက်တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းကဲ့သို့ SMS ကိုမည်သို့ရရှိရမည်နည်း
အဆိုပါ appcrash ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနည်း